Mad Computerist | Myanmar Mp3 Album
Home / Mad Computerist
Author Archives: Mad Computerist
D.J Phyo Vs Lazy Okka Remix (D.J Phyo, Lazy Okka)
May 23, 2011 Mad Computerist Myanmar Artist Leaveacomment
ဆုံနိုင်ခွင့် (အဲလက်စ်, ထွန်းအိန္ဒြာဗို)
May 19, 2010 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အဲလက်စ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို Myanmar Artist4Comments
လေးဖြူ – မံမီများ (Mummies)
It’s just an old album of Lay Phyu and I just uploaded according to the request. Download Link
May 19, 2010 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) လေးဖြူ Myanmar Artist6Comments
Sample Songs from 2Pluz’s 2nd Album “နတ်သမီး”
I liked 2Pluz since their first album. 😉 I also like this one. This one become better. 😀 I wonder why they don’t succeed. 😕 Wish they’ll get famous with this one. 8) ¶ 2Pluz’s 2nd Album “နတ်သမီး” will be released in mid January of 2010 ¶ ¶ only Audio CD and will try to … Continue Reading →
September 8, 2009 Mad Computerist 2PLUS အဆိုတော် (အဖွဲ့) အခွေ (တကိုယ်တော်) Myanmar Artist Unreleased Albums 19 Comments
၁. NGIIK – ပေးဆပ်ခွင့် ၂. Example – အပျော်သဘော ၃. မျိုးကျော့မြိုင် – မနက်ဖြန်များကိုတွေးကြောက်မိသူ ၄. မေစပယ်ညို, Example – Internet ထဲမှာ ၅. Cobra – အပျိုကြီး ၆. Big Bag – To … တစ်ဘဝ ၇. အဲလက်စ် – Director ၈. NGIIK – မိုးသည်းထဲမှာပုန်းရှောင်သူ ၉. Example, ငယ်ငယ် – တွေ့ခွင့်ရမယ့် အချိန်တွေတိုင်း ၁၀. NGIIK – အတောင်ပံပါရင်မင်းဆီကို
July 10, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) အဲလက်စ် ငယ်ငယ် မေစပယ်ညို မျိုးကျော့မြိုင် Big Bag Cobra Example Myanmar Artist NGIIK7Comments
၁. စိုင်းစိုင်း၊ Rဇာနည်၊ မျိုးကျော့မြိုင် – Rap & Roll ၂. ကောင်းမြတ်၊ ဇမ်နူး – သစ္စာရှိကြေး ၃. ဆုန်သင်းပါရ် – ရှင်သန်ဆဲ ၄. မို့မို့ – မိုင်ပေါင်းကုဋေ ၅. ခင်ဘုဏ်း – မြင်ပါဦး ၆. ဇေယျာသော်၊ ငယ်ငယ် – ယုံကြည်ထားလိုက် ၇. ဇမ်နူး – အချစ်ရှိသောနေ့စွဲများ ၈. ဟန်ထူးလွင် – လွင့်လွင့်သွားဆဲ ၉. ငယ်ငယ် – တို့အချစ်တွေယူ ၁၀. ရွှေထိုက် – မင်းလေးအနားကို ၁၁. မျိုးကျော့မြိုင် – ၂၀၀၄ Remix
June 15, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စိုင်းစိုင်း ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် ဇမ်နူး ရွှေထိုက် ကောင်းမြတ် ခင်ဘုဏ်း မို့မို့ မျိုးကျော့မြိုင် ဟန်ထူးလွင် Myanmar Artist Rဇာနည်5Comments
၁. ဆင်ပေါက် – တစ်မျိုးနှစ်မျိုး အမျိုးမျိုး ၂. ပန်းရောင်အလွမ်း ၃. ညနေ ၄. နောက်ဆုံးအချိန် ၅. ဘာဖြစ်ဖြစ် ၆. ငါးဆယ်ပေးပါ ၇. ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်း ၈. ကြိတ်ပုန်း ၉. အလင်းရောင်မရှိဘူး ၁၀. တစ်ခါတည်းပါ Other artists, unknown. Pls provide me if you have any information about that.
June 15, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) ဆင်ပေါက် Myanmar Artist Leaveacomment
၁. ဇော်ဝင်းထွဋ် – စကြာဝဠာထဲမှာကမ္ဘာ၊ ကမ္ဘာထဲမှာ မင်းနဲ့ငါ ၂. ချစ်ကောင်း – ပြသနာ ၃. ဖြူဖြူကျော်သိန်း – မြင်သောငိုသောမျက်လုံးများ ၄. စည်သူလွင် – သွားမယ်မတားနဲ့ ၅. သျှီ – အဓိပ္ပာယ်ရှိသောလူ ၆. ဟယ်ရီလင်း – ဧည့်ခန်းဆောင်မှအသံများ ၇. မီးမီးခဲ – နတ္ထိအခန်း ၈. ရင်ဂို – သချိုင်းကအမှန်များ ၉. ဇော်ဝင်းထွဋ်, ဟယ်ရီလင်း, ရင်ဂို – မင်းပေးတဲ့ရေတစ်ခွက် ၁၀. အဖွဲ့ – ကမ္ဘာသစ်
June 15, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ရင်ဂို ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဇော်ဝင်းထွဋ် ချစ်ကောင်း မီးမီးခဲ ဟယ်ရီလင်း သျှီ Myanmar Artist2Comments
၁. Rဇာနည် – အချစ်ခေါ်သံ ၂. ဆုန်သင်းပါရ် – မီးပြတိုက် ၃. Lလွန်းဝါ – တစ်ချက်လေးစောင်းငဲ့ကြည့်ဦး ၄. ဂရေဟမ် – စဉ်းစားကြ ၅. တင်ဇာမော် – အချစ်ဒါဏ် ၆. ဇော်ပိုင် – ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး ၇. အဲလက်စ် – မသိလို့မေးတာလား ၈. ချောစုခင် – အမိန့် ၉. ဖြိုးကြီး – မီးထဲကလူသား ၁၀. ခင်ဘုဏ်း – ပျော်စရာသီချင်းနဲ့ ကကြမယ် ၁၁. အဖွဲ့ – ကမ္ဘာသစ်
June 15, 2009 Mad Computerist ဖြိုးကြီး အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) အဲလက်စ် ဂရေဟမ် ဆုန်သင်းပါရ် ဇော်ပိုင် ချောစုခင် ခင်ဘုဏ်း တင်ဇာမော် Lလွန်းဝါ Myanmar Artist Rဇာနည်7Comments
ပွဲတော် Album (2)
၁. Idiots – အချိန်တန်တော့ ၂. Wine – လူညာကြီး ၃. နီတွတ် – ကံကောင်းသူ ၄. ဟိုအဖွဲ့ – ဖြူစင်တဲ့အချစ် ၅. ဟိုအဖွဲ့ – မင်းသိမှာပါ ၆. Cosy – လမင်းသို့ ၇. City FM – Advertisement ၈. ဂျောက်ဂျက် – ငါတို့နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ ၉. DVP, ဇမ်နူး – လွဲမှားသွားတဲ့အခါ ၁၀. Flaw – ပြောလိုက်တော့ ၁၁. လယ်ထွန်စက် – ကျိတ်ခံတော့ ၁၂. Dinner Flame – ငှားပါ ၁၃. Caution – ဂြိုလ်ကောင်မလေး
May 30, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အခွေ (အများ) ဇမ်နူး ဂျောက်ဂျက် ဟိုအဖွဲ့ Idiots Myanmar Artist 12 Comments